သက်ဝေ: ဘလော့ဂ် မှတ်တမ်း - အပိုင်း (၁)
မောင်မျိုး August 26, 2010 at 11:07 PM
အစ်မ ဘလော့က င်္ဆီင်္ပုံးမှာ ပထမဆုံးကော့မန့်ပေးဖူးတာ ဘယ်သူလဲမသိ ????
That's the great post with good facts & good point of view for blogging.
CCT August 26, 2010 at 11:52 PM
ရေးထားတာလေး ကောင်းပါတယ်။ ဘလော့ရေးသူတွေအတွက် သိမှတ်စရာလေးတွေ၊ ဂရုပြုစရာလေးတွေ မှတ်သွားပါတယ်။
အပေါ်ကပုံကို သိပ်သဘောကျတယ် သိပ်တူတာပဲ။
Kay August 27, 2010 at 12:34 AM
ဟယ်..ဒီပုံလေး ကြည့် ရတာ.. ..သိဖူးတဲ့.. တယောက် များလား မသိဘူး..။ ဟုတ်ပါတယ်.. သူ ..မှ.. သူ.. အစစ်...။
အဲဒါကြောင့် ..ထင်ပါတယ် လို့...
nu-san August 27, 2010 at 12:46 AM
စိတ်သဘောထားချင်း တော်တော်များများ တိုက်ဆိုင်ပါတယ် အမ.. ဒုတိယပိုင်းမျှော်နေမယ်နော်.. :) မပန် ပုံဆွဲတာတော်လိုက်တာ... :))
mirror August 27, 2010 at 12:52 AM
မကြီး.. မကြီးပြောမှမဟုတ်ဘူး။ အမြဲသတိထားမိတာပဲ။
ရေးသောစာ၊သူများဆီမှာပြောသောစကား..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးတယောက်က အငယ်ကိုပြောသလိုမျိုး ညီမကိုတော့ ခံစားမိစေတာပဲ..။နူးညံ့ညင်သာမှုကိုလဲ ထိတွေ့မိစေတာပဲ..။
khet myint myint August 27, 2010 at 2:14 AM
ကျနော်ပြောချင်တာ အမသက်ဝေ ရေးတာနဲ့ တူတူပါပဲ ၊ အမသက်ဝေ စာရေးတာ ကောင်းလိုက်တာ ။ စာရေးသူရဲ့စာကိုကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့စိတ်တွေ ရှင်းနေတာကို တွေ့မိပါတယ် ။
ရွှန်းမီ August 27, 2010 at 3:01 AM
ညီမကတော့ ဘလော့ရေးတာ ကြာလာလေ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ် ပိုဖြစ်လာလေပဲ..
အစက ရေးချင်တာရေးတယ်.. တင်ချင်တာတင်တယ်..
အခုတော့ ရေးချင်တာရေးပြီးရင် ပြန်ခေါက်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်..
မေဓာဝီ August 27, 2010 at 6:14 AM
မသက်ဝေ .. အမစာကို ဖတ်ရင် အမရဲ့ စေတနာကို မြင်သာပါတယ်။ အမဘလော့ကို လာဖတ်ရတာလဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်၊ အပြစ်ကင်းတယ်။ အမြဲမဟုတ်တောင် မကြာမကြာ လာလာဖတ်ပါတယ် အမ ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 27, 2010 at 6:28 AM
ဟုတ်ပါတယ်.. တကယ်လဲ စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုစိတ်နေ စိတ်ထားမျိုးနဲ့ရေးတယ် ဘယ်လို ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သက်ရင့်လာတာနဲ့အမျှ နားလည်ခံစားနိုင်ပါတယ်.. ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာဆိုပေမဲ့ ကိုယ်စိတ်ထင်တိုင်း မရေးတတ်တဲ့၊ စာဖတ်သူတွေကို လေးစားတတ်တဲ့သူဆိုတာ ဖတ်ယုံနဲ့ နားလည်မိပါတယ်.. ဒီလို စာရေးသူတွေကိုလည်း လေးစား ချီးကျူးမိပါတယ်.. စေတနာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စာမျက်နှာတိုင်းဟာ သန့်ရှင်းလှပနေမှာပါ... ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်..
sonata-cantata August 27, 2010 at 11:24 AM
ဘလော့ဂ်အပေါ် ပြတ်သားတဲ့ သဘောထား ရှိသူ
အဲ့စာလုံး အလွန် သုံးချင်နေလို့
စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း မန့်နေတဲ့ အမိုက်အမဲလေးကိုလည်း
ဒီတယောက်ကတော့ လူနဲ့ စာ တခြားစီ
ဒါပေမဲ့ ဘုရားစူး တယောက်ထဲပါဗျာ အဲ ရှင်းP
TURN-ON-IDEAS August 27, 2010 at 12:22 PM
သိပ်ကို အထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းတဲ့ အစ်မတွေကို အပြင်လောကမှာ တွေကြုံဖူးသလို၊ virtual worldထဲမှာလဲ သိကျွမ်းခင်မင်ဖူးပါတယ်...
အစ်မသက်ဝေ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ အပြင်မှာ မမြင်မတွေ့ဖူးပါဘူး၊
အစ်မရေးတဲ့ စာတွေဖတ်ပြီး လေးစားရာကနေ ခင်မင်လာခဲ့တာပါ...
လူဆိုတာ ၁၀၀%perfect မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်...ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်းကို အစ်မသက်ဝေတို့လို အသိဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစာဆင်ခြင်တတ်တဲ့ အမှန်အမှားကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်...
ကျနော့် ဒီကွန်မန့်ကို ရေးလိုက်တာဟာ...
အားရဝမ်းသာနဲ့ ဒါငါတို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဆိုပြီးတော့ ဂုဏ်ယူမိတဲ့စိတ်ကြောင့်ပါ...
တစ်ယောက်ယောက်ကို အတင်းမျက်နှာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး...
ဒီကွန်မန့်ကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ အကုသိုလ်စိတ် မဝင်စေချင်ပါဘူး...
(အစ်မသက်ဝေ... ပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးနော်၊ လမ်းမှာတွေ့ရင် လှမ်းခေါ်မယ်။)
ညီမလေး August 27, 2010 at 4:12 PM
မိုက်တယ်ကွာ.. ဒီပိုစ့်ကို ၁၀၀% ထောက်ခံတယ် ။ စာတွေအများကြီး ဆက်ရေးနိူင်ပါစေလို့ ညီမလေး ဆုတောင်းတယ်နော် ။
မေဇင် August 27, 2010 at 4:49 PM
ဖြိုးအောင် August 27, 2010 at 7:13 PM
ဘာပဲလုပ်လုပ် အသိတရားနဲ့ သတိတရားကို လက်ကိုင်ထားရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တမင်သက်သက် တယောက်နဲ့ တယောက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တာမျိုး၊ ကိုယ်ထင်ပေါ်ချင်တာနဲ့ သူများအားနဲချက်၊ အပြစ်မှန်သမျှ မလိုအပ်ပဲ မှိုချိုး၊ မျှစ်ချိုး ပုံကြီးချဲ့ ပြောတာမျိုးက မျက်နှာမော့ပြီး တံတွေးထွေးသလိုပါပဲ။
တချို့ဘလော့ဂ်ဂါတွေ သူတို့ အရေးအသား အတွေးအခေါ်တွေက တယ်ဟုတ်ပါလားလို့ အထင်ကြီးမယ်ကြံတုန်းရှိသေး..သူတပါးကို ဘာအကျိုးမှမရှိနိုင်တဲ့ ကိစ္စအတွက်၊ တစ်တစ်ခွခွဝေဖန်ထားတွေ ဖတ်ပြီး စိတ်အတော်ပျက်မိတယ်။ အင်းးးး..သူလဲလေ လောကီသားပေမို့ ..ဆိုပြီး ပြန်တွေးရတယ်းး((
sosegado August 27, 2010 at 9:55 PM
၂၀၀ ကျော်ရေးနိုင်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ၊ ရေးကြည့်ရင်မလွယ်မှန်းသိလာခဲ့တယ်၊ ဘောင်တော့မခပ်ထားစေချင်ဘူး စေတနာတွေရော ဝေဒနာတွေပါရေးပါ
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) August 27, 2010 at 9:58 PM
အပိုင်း(၂)ကို မျှော်နေမယ် အမရေ။
tg.nwai August 28, 2010 at 2:12 AM
သက်ဝေရေ... ဘလော့ဂ်မှတ်တမ်းကလေးထဲက မှတ်သားစရာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖတ်ရတာ ၀မ်းသာကျေနပ်ရပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တခု ရေရှည် အဖက်ဖက်က ကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကလည်း တော်တော်ကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း သက်ဝေကို အားကျချီးကျူးနေမိတာ အခါခါရယ်ပါ။
အပိုင်း(၂)ကို မျှော်နေပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ...
ပုံရိပ် / Pon Yate August 28, 2010 at 11:42 AM
ဘာလိုလိုနဲ့ ၃နှစ်နီးပါး ရှိသွားပြီ။ အားပေးနေပါတယ် အစ်မရေ။ နောက် ပင်စင်ယူပြီး အဖွားကြီး ဖြစ်ကြတဲ့ အထိ ဘလော့ဂ် ဆက်ရေးနေနိုင်ကြရင် ကောင်းမယ် နော် :D။
Tin August 28, 2010 at 12:08 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် Blog မှ တ ဆင့် ပထမ ဆုံး အ ကြိမ် ဝင် ဖတ် ပြီး မန့် ခဲ့ ပါ တယ် ။
အစ်မသက်ဝေ က သူ တ ပါး "ဖြစ၊်ပျက်" နဲ့ မိ မိ "ဖြစ၊်ပျက်" ကို သိ နား လည် အောင် ယှဉ် ပြီး စေ တ နာ ကောင်း နဲ့ ရေး ထား တာ ကောင်း ပါတယ်။ ခင် မင် လေးစား စွာ ဖြင့် ။
လုလု August 28, 2010 at 1:30 PM
မမသက်ဝေ့့ 
အောင်သာငယ် August 28, 2010 at 2:09 PM
အတော်များများ... သဘောထား တိုက်ဆိုင်၏...
လူချင်းတော့ သိနေသလိုလိုပဲ...း)
ချစ်ကြည်အေး August 28, 2010 at 2:45 PM
သူငယ်ချင်းရေ...နင့်စိတ်ကို သိနေသူဆိုတော့ ဖတ်ရင်း နင့်ကို မြင်မြင်နေမိတာပဲ။ ၃နှစ်နီးပါး ရပ်တည်နိူင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးနော်၊ အားလုံးက ချစ်ကြတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေနိူင်ဖို့၊ စကားနဲ ရန်စဲ နေနိူင်ဖို့၊ လျစ်လျူရှူသင့်တာတွေ ရှူနိူင်ဖို့ဆိုတာ ပိုတောင် မလွယ်သေးတယ်။ ချီးကျူးပါတယ် သူငယ်ချင်း....:)
ကြည် August 28, 2010 at 5:04 PM
သက်ဝေဆိုတာ ဘယ်သူမှန်းမသိသလို မခင်ဖူး မမြင်ဖူးခဲ့ပါဘူး..ဒါပေမဲ့ သက်ဝေရဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီး သက်ဝေကို ခင်မင်ချစ်ခင်သူပါ။ခုတော့ စာတင်မက ဓါတ်ပုံတွေကိုပါ ချစ်နေရော။
မြသွေးနီ August 29, 2010 at 12:10 AM
လေးစားပါတယ် အစ်မသက်ဝေ။ ဘလော့ဂ် မှတ်တမ်း - အပိုင်း (၂)လေး တစ်ထိုင်ထဲ ဖတ်ချင်လာမိတယ်။
wwkm August 29, 2010 at 12:11 AM
မောင်လေး August 29, 2010 at 1:03 AM
“သာမန်လူတယောက်မို့ တခါတခါမှာ ကိုယ့် စိတ်နဲ့ မတိုက်ဆိုင်ရင်၊ အမြင်မတော်ရင် ပြောချင် ဆိုချင်စရာ စကားလုံးတွေကတော့ ပါးစပ်ဖျားမှာ တန်းစီနေတာပေါ့… ကိုယ်လဲ ဆူးရှိတတ်တဲ့ လူစားမျိုးပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြောသင့် မပြောသင့်… ကိုယ် ဝင်ပြောလိုက်လို့ အကျိုး ရှိ မရှိ ဒါတွေ အားလုံးကို အမြဲတမ်း ချိန်ထိုးပြီး သတိထားခဲ့တယ်”
Hmoo August 30, 2010 at 1:58 AM
ဘလောက်တခုကပေးတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ တွေးခေါ်ပြောင်းလဲ ရှင်သန်တိုးတက်လာပုံကိုဖတ်ပြီး